२९ असोज, काठमाडौं । यस वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंको अवसर पारेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ नोट सटही गरेको छ । हरेक वर्ष सर्वसाधारणहरुका लागि केन्द्रीय बैंकले नयाँ नोट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । दशैं नजिकिएसँगै नेपालीहरुको घर–परिवारमा नयाँ नोटको खोजी सुरु हुन्छ । दशैंमा टीका लगाएर नयाँ नोटको दक्षिणा दिने चलन निकै […]
अमेरिकाको एटलान्टा एयरपोर्टको सुरक्षा जाँचनेर हतियार पड्कदा भागदौड, उडान अवरुद्ध
विश्वकै व्यस्त मध्येको एक अमेरिकाको एटलान्टामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटनावश हतियार पड्कदा विमानस्थल तनावग्रस्त भएको छ । शनिबार दिउसो हार्टसफिल्ड ज्याक्सन एटलान्टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य सुरक्षा जाँच नजिकै हतियार पड्केको थियो । सुरक्षा जाँच गराइरहेका यात्रुको हतियार पड्केको जनाइएको छ । ती यात्रुले सुरक्षा जाँच गराइरहदा कसैले उनको झोलामा हतियार रहेको बताएपछि हतियार बाहिर निकाल्न […]
khasokhas.com 10 दिन पहिले
‘नोटको सुरक्षा सबै नागरिकको जिम्मेवारी हो’
धेरैजसो साना दरका नोट चाँडै काम नलाग्ने हुने गरेका छन् । ५०० र १ हजार रुपैयाँको नोट कम मैलिने गर्छ । १०० रुपैयाँका नोटहरू पनि कम नै मैलिन्छन् । धेरै चाँडो काम नलाग्ने हुने भनेका ५ रुपैयाँ, १० रुपैयाँ, २० रुपैयाँ लगायत साना दरका नोटहरू हुन् । काम नलाग्ने भएर आएका नोटहरू राष्ट्र बैंकमा जलाउने […]
दसैँमा टीकाको जति महत्त्व छ, त्यति नै दक्षिणाको पनि । ठुलाबडाको हातबाट आशीर्वाद टीका ग्रहण गरिसकेपछि दक्षिणाको रूपमा नगद पैसा पाइन्छ । जुन तपाईँले पनि पाउनुभयो होला । वा पाउँदै हुनुहुन्छ । याद गर्नु होस्, अब तपाईँले पाउने पैसा कसरी सुरक्षित राख्ने ? नोटको सुरक्षा गर्न नोटलाई सकभर वालेट वा पर्समा नपट्याईकन राख्नुहोस् । सकभर नोटमा कुनै पनि प्रकारको रङ नदल्नुहोस् । नोटमा जथाभाबी ¬लेख्ने, केरमेट गर्ने वा स्टिच गर्ने पनि नगर्नुहोस् । नोटलाई जलाउने वा च्यात्ने जस्ता गैर ऐन विपरीतका काम झु
दशैंमा रातो टीका र जमरा लगाउँदा मान्यजनहरूले आर्शिवादसँगै छोरीचेली, भान्जाभान्जी, ज्वाइँचेलालाई दक्षिणास्वरूप नगद समेत दिने प्रचलन छ । दक्षिणा दिने हाम्रो परम्परा डिजिटल युगले जति फड्को मारे पनि तत्काल हट्ने देखिँदैन । तर रातो टीका लगाइदिने हातले नगद नोट पनि चलाउँदा नोट बिग्रिन्छन् । त्यसकारण राष्ट्र बैंकले नोट सफा राख्न अनुरोध गर्दै सूचना जारी गर्छ । नोट कसरी सफा राख्ने त ? नोट सफा राख्ने धेरै उपायमध्ये एउटा हो, नोटलाई खामभित्र राखेर दक्षिणा दिने । यसका लागि उपयुक्त विभिन्न किसिमका खाम बजारमा पाइन्छन् । आकर्षक खाममा राखेर दक्षिणा दिँदा दक्षिणा पाउने बढी खुशी हुने वातावरण बन्न सक्छ । अलिकति खोजी गरेमा नेपाली बजारमा पारदर्शी, झ्याल भएका र रङीचंगी खाम पाइन्छन् । यस्ता खाम अनलाइनबाटै पनि खरीद गर्न सकिन्छ, जसबारे यहाँ केही चर्चा गरिएको छ : चमकदार रातो खाम यो खाम बजारमा सहजै पाउन सकिन्छ । साथै ई–कमर्श साइटहरूबाट समेत किन्न सकिन्छ । तर यस्तो खाम तुलनात्मक रूपमा केही महँगो पर्छ । एउटै खामको मूल्य रू. १०० पनि पर्छ । गणेश अंकित खाम यस्तो खाम पनि बजारमा सहजै पाइन्छ । तर यो झन् महँगो छ । यो खाम अनलाइन शपिङ गर्दा एउटैको ४०० रुपैयाँ पर्छ । सगुन खाम सगुन खाम विशेषगरी विवाह, पूजाआजा, चाडपर्वमा प्रयोग गरिन्छ । दशैंमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो खाम विभिन्न रंङहरूमा बजारमा उपलब्ध छन् । यसको मूल्य ५० रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । क्रीम खाम यो खाम सेतो, रातो, नीलो, पहेँलो जस्ता विभिन्न रङमा सादा हुने भएकाले यसको नाम ‘क्रीम’ खाम भनिने गरिएको हो । यो खामलाई चाडपर्वमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साधारण तर चारकोण मिलेको भएकाले यो खामलाई आकर्षक मानिने गरिएको छ । २५ पिस खामलाई अहिले बजारमा दशैं अफर भन्दै २२५ रुपैमाँ अनलाइन शपिङले विक्री गरिरहेका छन् । नेपाली कागजका खाम नेपाली कागजमा नै बनेका खाम बजारमा प्रशस्त पाउन सकिन्छ । ती खाम विभिन्न रङ, चित्र, आकृतिहरूमा उपलब्ध छन् । यस्ता तीनओटा खामको मूल्य १३५, चारओटाको १८० रुपैयाँमा पाउन सकिन्छ । आफूले दिएको दक्षिणा खामभित्रै रहे पनि बाहिरैबाट देखियोस् भन्ने चाहना हो भने पूरा पारदर्शी खाम पनि पाइन्छन् । खामभित्र के छ भन्ने थाहा पाउन सकिने तर पूरै पारदर्शी पनि नभएको खाम चाहिने हो भने झ्याल भएको खाम पनि पाइन्छ । झ्याल भएको खाम विभिन्न संस्थाले पत्राचारमा पनि प्रयोग गर्छन् । सफा नोटमा राष्ट्र बैंकको साँच्चै चासो हो भने नयाँ नोट सटही गर्दा नै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई खाम पनि दिने गर्नु उपयुक्त हुन्छ, सित्तैमा वा सहुलियत मूल्यमा । नोटको सुरक्षामा राष्ट्र बैंकको चासो नोटको सुरक्षामा राष्ट्र बैंकले चासो देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकाल चाडपर्वको बेला नोटलाई सुरक्षित तवरले प्रयोग गर्न खामदेखि वालेटसम्मको प्रयोग गर्न सकिने सुझाउँछन् । उनका अनुसार नोट सबैको सम्पत्ति भएकाले नोटलाई जतनसाथ प्रयोग गर्नुपर्छ । नोटको जतन गर्न ‘मनीब्याग’को प्रयोग गर्नुपर्छ । नोटमा केरमेट गर्नुहुँदैन, नोटलाई मैलो पार्ने कुनै काम गर्नुहुँदैन । सुकिला नोटको प्रयोग गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । कारोबारको भुक्तानी दिँदा यथाशक्य विद्युतीय माध्यम, कार्ड वा ई–वालेटको प्रयोग गरेमा नोटको जतन हुन सक्छ । नोटमा टाँचा वा स्टिच लगाउँदा नोट च्यातिने तथा स्टिच निकाल्न गाह्रो हुने र नोटको आयुसमेत घट्ने हुँदा यस्तो कार्य गर्नुहुँदैन । धार्मिक अनुष्ठान वा सामाजिक कार्य गर्दा नोटमा रङ, पानी, दूध, रगत पर्ने सम्भावना हुने हुँदा यसबाट जोगाउन बरु खामको प्रयोग गर्ने, दान पेटिकामा खसाल्ने वा रसिद लिई चन्दा दिने गर्नुपर्छ । प्रस्तुति : विजय दमासे
किन आवश्यक छ इन्टरनेट सुरक्षा ?
इन्टरनेटले हामीलाई धेरै अवसरहरू प्रदान गरेको छ । साथै, दुव्र्यवहार, शोषण तथा हिंसाको जोखिम पनि बढेको छ। इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग गर्नको लागि आफूले इन्टरनेटमा गर्ने गतिविधिले आफूलाई के प्रभाव पार्छ भनेर बुझ्नु आवश्यक हुन्छ। साथै अन्य व्यक्तिसँग के कुरा आदानप्रदान गर्ने तर्फ सचेत रहनु पर्छ र एकअर्कालाई सहयोग गर्नु पर्दछ। इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग गर्न तथा आवश्यक निर्णय लिनको लागि सहयोग
कमला ह्यारिस : डेमोक्रेटको सुरक्षित चयन
जो बाइडेनले अश्वेत समुदायकी कमला ह्यारिसलाई भावी उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मनोनयन गरेर अभूतपूर्व निर्णय
वर्षातमा स्मार्टफोनका साथै अन्य ग्याजेटहरू भिज्ने खतरा प्रबल हुन्छ । त्यसैले यो समयमा चिसो हातले स्मार्टफोनको प्रयोग गर्नु हुँदैन । हातलाई सुकाएर मात्र स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुपर्छ । घरबाहिर निस्कनुपरे आफ्नो स्मार्टफोन सुरक्षित राख्न बजारमा उपलब्ध वाटरप्रुफ पाउच प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
साप्ताहिक आषाढ २०७६
कायरो, फागुन १५ गते । इजिप्टको कायरोस्थित रेलवे स्टेसनमा बुधबार भएको दुर्घटनामा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ । इजिप्टको सुरक्षा र...
कायरो, कात्तिक १६ गते । इजिप्टका सुरक्षाकर्मीहरुले गरेको सुरक्षा कारबाहीमा परी यहाँका १८ लडाकू मारिएका छन् । देशको उत्तरी र मध्य...
नीतिविपरीत पूर्वविशिष्टको सुरक्षामा खटिएका ८७ प्रहरी फिर्ता
काठमाडौं : पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको निजी सुरक्षा र अन्य प्रयोजनमा खटिएका ८७ सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। फिर्ता हुनेमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) समेत छन्। फिर्ता भएकाहरूमा ५७ सुरक्षा गार्डका रूपमा रहेका थिए, भने ३० जना निजी सवारी चालकका रूपमा खटिएका थिए। यसरी नीतिविपरीत...